6 Crucial Semalt SEO Tips Ny mpandraharaha madinika dia tokony hanaiky
Ivan Konovalov, Tale Mpanantanteraka Successor Nizara ny traikefa momba ny fomba fametrahana mahomby ny Semalt Digital AgencySEO amin'ny orinasa.
Ny sasany amin'ireo orinasa Fortune 500 tsara sy mahomby indrindra eto amin'izao tontolo izao dia manana zavatra iray iombonana: ny ankamaroan'izy ireoManana tranonkala avo lenta, izay midika fa ny tranonkala ofisialy dia miseho ao anatin'ny vokatra vitsivitsy voalohany nateraky ny fikarohanaavy amin'ny tranonkala iray, indrindra rehefa misy toerana iray ao anaty fehezanteny. Na izany aza, ireo tranonkala ireo dia tsy tonga teo fotsiny-pahagagana. Misy ny fahaiza-manaon'ny avo lenta izay nampiasaina, ny dingana manaraka, ary ny fanadihadiana natao. Izany no ilay famaritana famintinanany zavatra ataontsika ao amin'ny Semalt dia.
Amin'ny famaritana azy, ny fikarohana fikarohana, izay antsoina koa hoe fikarohana ara-barotra na SEO, dia ny dinganamampitombo na manatsara ny fahitana ny tranokalan'ny aterineto - 300 щитов слот. Izany dia mitaky fikarohana teny fanalahidy, manatsara ny votoaty miaraka amin'ny teny manan-danja manan-danja,sy ny fampiasany stratejika amin'ny tranonkala iray mba hahafahany mampifandray kokoa ny fifandraisana, ny ROI, ary ny fidiram-bola avy amin'ny tsenan'ny lasibatra na ny fikasanampihaino. Ny tranonkala sosialy koa dia tena manan-danja tokoa raha ny momba ny SEO. Izany no tranga, eto ambany dia toro-hevitra SEO vitsivitsynatolotr'i Ivan Konovalov tokony ho fantatrareo fa mpandraharaha madinika.
1. Safidio ny teninao hoe marina
Ho an'ny olona rehetra, fara fahakeliny, ny momba ny SEO, amin'ny ankapobeny, dia hita fa tena manan-danja tokoa ny teny fanalahidy. Izy ireo diaireo mpamoha angatra ao amin'ny SEO, indrindra rehefa tafiditra ao anaty votoatiny. Raha ny tena marina, dia miteraka fitaovam-pikarohana ireony valin'ny fikarohana mifototra amin'ny famintinana ireo teny nofaritan'ny mpampiasa aterineto rehefa mijery vaovao momba ny tranonkala. mahazoNy teny ifaneraseranao dia midika hoe ao anatin'izany ny teny ifaneraseran'ny teny na ny hevitr'izy ireo, izay hampidirina ny tsenanareo eo amin'ny sehatra rehefa mitadyho an'ny serivisy na vokatra atolotry ny orinasa..Mety ilaina ny famoronana sasany, na dia orinasa SEO azadia afaka manampy amin'ny famolavolana paikady maodilim-pitondrantena izay hivoaka ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
2. Ampiasao sary sy horonan-tsary mipoitra ao amin'ny SEO
Ny fikarohana dia maneho fa ny horonan-tsary sy ny sary dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny fivarotana. Izany dia noho izy ireo mifanakalo hevitra kokoa symahafinaritra raha ampitahaina amin'ny lahatsoratra tsotra. Rehefa ampiasaina amin'ny votoaty, horonan-tsary sy sary dia mahasarika ny mpijery. Izy ireo koaMialà fahatsiarovana maharitra ao an-tsain'ny tsenanareo. Na izany aza, ireo zaza ireo dia tokony hiaraka amin'ny motera fikarohana ihany koaNy votoatiny manintona sy manan-danja manintona ao anaty lahatsoratra, milaza ny filazalazana sy ny fampahalalana izay mifandraika amin'ny hafatra lehibe nalefaao anatin'ny fampielezan-kevitra SEO. Betsaka ireo mpivarotra an-tserasera sy mpampiasa aterineto no voatarika handray andraikitra amin'ny fanintelonyary horonan-tsary / sary manan-danja, noho izany dia azonao antoka fa mampiasa ny tsara indrindra azonao ianao.
3. Hamarino ny tranonkalanao ho an'ny karoka fitadiavana samihafa
Amin'ny maha-mpandraharaha madinidinika, tsy mety ny manahy hoe efa fantatrao ve fa izao tontolo izao no iainantsika. Ny ankamaroan'ny mpampiasa aterinetoAmin'izao andro sy taona izao dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fitaovany finday, izay ahitana smartphones sy takelaka, raha oharina amin'ny biraosolosaina sy solosaina finday. Mba tsy hahavery ny ampahany lehibe amin'ny mofomamy ho an'ny fifaninanana, aoka ho azo antoka ny fanatsaranany tranonkalanao momba ny fampivoarana ny findainao.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tranokalanao dia tokony hivoaka amin'ny fitaovana finday tsy misy fanaintainana na tsy fahampiana. Izany, ny anaoNy mpihaino na ny tsenan'ny lozam-pifamoivoizana dia afaka mahazo vaovao mivaingana na mividy ny vokatra / tolotra ataonao. Tsy voatery hisymiandry mandra-paha-ao amin'ny birao izy ireo mba ahafahan'izy ireo mandidy pizza sasany, mihevitra fa izany dia ny sehatry ny orinasa. Mihoatra lavitra noho izanyamin'ny olana ara-panatanjahantena amin'ny tranonkala, ny fananana SEO-namanay, tranonkala finday ao amin'ny tranonkalanao dia hamaly soa anao tsara.
Na dia tsy misy isalasalana aza fa i Google dia mpanjaka mpanodikana, dia maro ihany koa ny olona misafidy safidy hafa tahaka an'i Bing sy Yahoo,mba hitenenana vitsivitsy. Tsy te hametraka ny atody rehetra ao anaty harona ianao. Ho mora kokoa ny hiverenanao amin'ny fampiasam-bola SEO anaony tranokalanao ho an'ireo mpilalao hafa ao amin'ny sehatry ny fikarohana, koa ho an'ny dokambarotra biolojika sy karama..Amin'ity tranga ity dia mety ho fahendrena izanyMianara zavatra iray na roa momba ny fomba hametrahana ireo tranonkala karazana fitadiavana vohikala.
5. Mitazona ny masonao eo amin'ny SEO eo an-toerana
Raha manomboka ao an-trano ny fiantrana dia tsy ho vitan'ny orinasam-barotra izany amin'ny tsena an-tserasera raha tsy misy tetikady mandresy amin'ny SEO eo an-toerana, indrindraraha fanombohana izany. Amin'ny maha-mpandraharaha hendry, zava-dehibe ny manamarika fa ny tsenanareo eo an-toerana dia afaka mamaritra raha toa ka ny tanjaky ny firenentsikana tsy hahomby amin'ny aterineto manerana ny sisintany. Matetika ny famokarana traikefa organika araka izay azo atao amin'ny tranokalanaoavy amin'ny fikarohana ao an-toerana, izay tena manakiana be loatra rehefa tonga eo amin'ny fanodinana motera.
Mba hahazoana ny ankamaroan'ny ezaka fanatsarana ny fikarohana, dia fotoana tena nodinihanao ny fampiasana ny findramam-bola any an-toerana. AuthorityNy tranonkala toy ny pejy jiro, ny Yelp, ary ny tranokala hafa dia mety ho tonga ihany koa. Zava-dehibe ny hiantohana foana izanyNy fampahalalana momba ny raharaham-barotra momba ny lisitra eo an-toerana dia mitoetra ho marina sy marina, indrindra indrindra ny fanaraha-maso ny fomba fifandraisan'ny orinasa sy nyNy antsipiriany momba ny adiresy dia hita ao amin'ny sehatra an-tserasera isan-karazany.
6. Aza Miandry Mandrakizay Ny Tranonkalan'ny Site Tsy Mety Maty
Eny, mety namoaka lahatsoratra amina lahatsoratra sy vohikala pejy ao amin'ny tranokalanao taloha ianao; Saingy tsy midika izany fa ny fanavaozanadia tsy ilaina raha tsy amin'ny fiafaran'ny fotoana. Izay olona manana fampianarana fototra dia manaiky fa ny fampahalalam-baovao sasany dia lasa tsy manan-danjaamin'ny fotoana. Indrindra raha ny mpanatrika aterineto sy ny mpividy tranonkala, dia tsy te-hamela azy ireo tsy hivoaka ianao. Mamoaka vaovao vaovao,ny votoatiny, ary ny angon-drakitra manan-danja hatramin'izao dia hitazona ny raharaham-barotra mialoha ao amin'ny lalao, indrindra raha ny momba ny fifamoivoizana sy ny fikarohanafilaharana. Aoka ho azonao antoka fa hanome votoaty manan-danja sy mahaliana ianao fa hahita ny fanampiana sy ny fandraisana anjaranao ny tsena eny an-tsena na ny mpihaino.Matokia ahy, ny mpanjaka dia andininy, ary tsy hanenenanao ny ezaka SEO anao.
Na dia tsy fantatry ny maro aza, SEO dia singa manan-danja amin'ny fahombiazan'ny orinasam-pandraharahana amin'ny aterineto. Amin'ny alalan'ny Fikarohana mazava sy voalaminatetikasam-panatontosana maoderina, tonga kokoa ny fifamoivoizana, ny lalao Google ambony, ny fivarotana bebe kokoa, ary ny fitomboana bebe kokoa amin'ny orinasanao, indrindra indrindra amin'ny aterinetoasa. SEO dia afaka mahazo teknika loatra ary mandany fotoana be loatra, mba hahafahanao mampiasa vola ao amin'ny sampan-draharahan'ny SEO mba hakany orinasa an-tserasera.